ရိုးသားစွာ ကြက်သားစားနိုင်ကြပါစေ – YANGON STYLE
အရမ်းခေတ်စားပြီး Gamer အများစုရဲ့ အာရုံစိုက်ခြင်းခံနေရတဲ့ Pubg Mobile Game ရဲ့ Hacker ၊ Cheater ၊ Bug Error အကြောင်းလေးတွေကို ရေးသားပေးပါမယ်။ Shooting Game တွေမှာ Hack တာတွေ Bug Error တွေကတော့ အမြဲရှိနေပါတယ်။ Pubg Game နဲ့ပတ်သက်ပြီး Facebookမှာ အမြဲဂယက်တွေ စကားစစ်ပွဲတွေ အမြဲမပြတ်ရှိနေတဲ့ အကြောင်းတွေထဲက တစ်ခုကတော့ No Hacker ၊ No Cheater ၊ No Bug Error ဆိုတာပါပဲ။ Facebook မှာ အဲလိုတွေ အော်နေပေမဲ့ Pubg Sever ကို Report ထုဖို့ကြတော့ လူနည်းစုပဲ ရှိပါတယ်။
လူမုန်းများတဲ့ Pubg Cheater တွေ Hack လေ့ရှိတဲ့ အမျိုးအစား ၆ မျိုးကို သိထားဖို့အတွက် ထည့်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
1. ESP Hack (Wall Hack)
3. Armor Hack
4. No Recoil Hack
5. UC Hack
6. Location Hack (Radar Hack)
Hack တဲ့ အမျိုးအစားတွေ သိရပြီဆိုတော့ Hack နည်း အခြေခံသဘောလောက်ကို ဖတ်မိသလောက်လေး ပြန်ပြောပြပါမယ်။ Hack တဲ့အခါမှ Android က Open Source Platform ဖြစ်တော့ ပိုပြီး အဆင်ပြေပါတယ်။ Android ဆိုရင် Root Accessed ရှိရပါမယ်။ i Device ဆိုရင်တော့ Jailbreak ဖောက်ထားရပါမယ်။ Instant App သုံးပြီးလည်း တချို့က Hack ဆော့ကြပါတယ်။ Instant App သုံးတာကတော့ ဂျင်းထည့်ခံရဖို့များပါတယ်။ App တွေ Down တယ်။ Run ကြည့်တော့မရဘူး။ အခန့်မသင့်ရင် ကိုယ့်ဆီက Data တွေပါသွားနိုင်ပါတယ်။ Pro အဆင့်ရှိတဲ့သူတွေကတော့ ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ Script တွေ၊ သီးသန့် Software တွေရေးပြီး Hack ကြပါတယ်။ Hack တဲ့ ကဏ္ဍလေးပြီးတော့ Bug Error လေးတွေဆီ သွားကြတာပေါ့။
Bug Error တွေကို အသုံးပြုပြီးတော့လည်း ဝင်လို့မရတဲ့နေရာတွေဝင်ပြီး Enemies က ကိုယ့်ကိုမမြင်တဲ့အတွက် စိတ်ကြိုက်ပစ်လို့ရတဲ့ နည်းတွေပါ။ Season တစ်ခုပြီးလို့ Update Version တင်တိုင်းတော့ Fix ဖြစ်သွားတာလေးတွေ ရှိပေမဲ့ တချို့နေရာတွေမှာတော့ သုံးလို့ရတာတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ Hack တာရော Bug Error သုံးပြီးဆော့တဲ့ သူတွေတွေ့ရင် Report ထုကြပါ။ အော်နေရင် ပင်ပန်းပါတယ်။
Pubg Game က Graphic Design ကို သဘာဝနဲ့အနီးစပ်ဆုံးရေးသားထားတဲ့အပြင် ၊ Game ရဲ့ Rule & Policy ကိုလည်း သဘာဝထက်တောင် ပိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ ထိန်းချုပ်ထားတာပါ။ Game ကို Hack ဆော့တာပဲဖြစ်ဖြစ် Bug Error သုံးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်သိရင် Account ကို ၁၀ နှစ်အထိ ပိတ်ပင်ခံရပါတယ်။ Pubg Sever က Battle Ground မှာ Bots (Fake Players) တွေ အလကားထည့်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ Hack ထားတဲ့သူက Bot ကို နံရံဖောက်ပြီး ပစ်ရင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ Damages ထက်များရင် Sever က သိအောင်ထည့်ထားတာပါ။ အဲဒါကြောင့် ရိုးရိုးသားသားပဲ ဆော့ကြပါလို့ သတိပေးပါတယ်။
နောက်ထပ် Account Ban ခံရနိုင်တာကတော့ Pubg Mobile Game ဖြစ်တဲ့အတွက် Mobile ဖုန်းတစ်ခုထဲသာ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီး Mobile Edition ကို Game Sir X1 တို့လို Bluetooth Emulator ၊ Gamepad Wireless တွေနဲ့ ကစားရင် Ban ခံရပါတယ်။ အဲတော့ L1 R1 Joy Stick နဲ့ပဲဆော့တာ အန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောချင်တာကတော့ Game ဆော့တဲ့အခါမှာ အပျော်သဘောဆော့ဆော့၊ Professional သဘောပဲဆော့ဆော့ ရိုးရိုးသားသားပဲ ဆော့တာက ကိုယ့်ရဲ့ Skill ကို မြင့်စေပါတယ်။ မသမာတဲ့နည်းနဲ့ ဆော့တဲ့သူတွေတွေ့ရင်လည်း Report အမြဲထုပါ။ Pubg Server ကလည်း ပို့ပေးမှ အရေးယူနိုင်မှာပါ။ Server ဘက်ကလည်း အဲလိုပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းဖို့အတွက် Report ဆိုတာကို ထည့်ပေးပြီး တောင်းခံနေတာကို အမြဲသတိရှိရှိနဲ့ မသမာသူတွေကို နောက်မလုပ်နိုင်အောင် အပြစ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း Hack တာတွေ၊ Bug Error တွေမသုံးဘဲ ဆော့တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ Cheater ၊ Hacker ၊ Bug Error သမားများရဲ့ ရန်မှကင်းဝေးပြီး ကြက်သားများများ စားနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။